Masinina vacuum factory - mpanamboatra masinina vacuum any Sina, mpamatsy
Masinina fonosana azo atao thermoform
Masinina fonosana henjana thermoform
Masinina fonosana volo Thermoform
Tombo-kase semi-mandeha ho azy
Mpamaritra savily mandeha ho azy mitohy
Masinina Vacuum ho an'ny efitrano roa
Masinina malalaka kokoa ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
Masinina Vacuum amin'ny latabatra
Masinina Vacuum amin'ny Desktop
Masinina Vacuum ivelany mitsangana
Masinina Vacuum an'ny kabinetra
Mpanera amin'ny bandy
Voka-pambolena sy fiompiana
Fonosana tsy sakafo
Kitapom-batana novaina (MAP)
Momba ny UTIENPACK
Masinina fonosana Thermoforming Fexible
Masinina fonosana vacuum amin'ny Desktop (Inflate)
Masinina fonosana horonantsary karazana latabatra
Masinina fonosana fanodinana volo ivelany
Masinina fonosana vacuum an'ny kabinetra
Fanamafisana ny masinina fonosana
2021 Latest Design Instant Noodle Packing Machine -...
DZ (Q) -600LG
Ny masinina dia manisy tombo-kase miaro pneumatika, efitrano fandraisam-bahiny lehibe ary fonosana mangarahara miendrika karazana misokatra. Ny efitrano fantsona dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, mety amin'ny akora simika, sakafo, elektronika, fanafody ary indostria hafa.
DZ (Q) -600L
Ity masinina ity dia milina fonosana poakaty ivelany mitsangana, miaraka amin'ny tombo-kase mitsangana, izay mety amin'ny fako na fonosana azo avy amin'ny entana maridrefy na vokatra mora araraka.
Ity masinina ity dia milina famonosana banga karazana latabatra misy rafitra banga manokana sy fitaovana fanalefahana. Ny masinina manontolo dia mifono ary azo apetraka eo amin'ny birao ho an'ny fonosana banga.
DZ (Q) -600T
Ity masinina ity dia milina fanangonana fantsom-baravarankely ivelany, ary tsy voafetra amin'ny haben'ny efitrano fandraisam-pefy. Izy io dia afaka mamoaka mivantana (manondraka) ny vokatra hitazomana ny vokatra vaovao sy hatrany am-boalohany, misoroka, mba hanitarana ny fitehirizana na ny fitehirizana ilay vokatra amin'ny teny.
Masinina fonosana fanodinana volo lehibe kokoa
Izy io dia iray amin'ireo mpanamory fantsona malaza indrindra. Ny masinina dia mandray efitrano fantsom-by tsy misy fangarony ary fonosana plexiglass tanjaka mahery mangarahara. Ny milina iray manontolo dia tsara sy azo ampiharina ary mora ampiasaina.
Masinina fonosana vakum
DZ-500 / 2S
Matetika ilay mpanangona banga dia hanaisotra ny rivotra rehetra ao anaty fonosana, ka ny vokatra ao anaty kitapo dia azo tazonina r mandritra ny fotoana lava kokoa.
Miaraka amin'ny efitrano roa miasa ao aoriana fa tsy mijanona, ny masinina fanangonana volo indroa dia mahomby kokoa noho ny milina fako mahazatra.
255 Shuguang Road, Kebei Industrial Zone, Shaoxing, 312081, Sina